Ahoana izany any Fryslân, Holandy, henika fiteny Frisian ny toerana rehetra amin’ny fiainana andavanandro, eny fa na dia amin’ny aterineto aza · Global Voices teny Malagasy
Mampiroborobo fahazoa-miditra nomerika ny fiteny Frisian i Mirjam Vellinga
Voadika ny 26 Avrily 2022 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, বাংলা, Italiano, English
Sary nalain'i Willem van Valkenburg ary nampiasana lisansa CC BY 2.0.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Manomboka ny 20-26 Aprily 2022, dia hampiantrano ny kaonty Twitter ifandimbiasana @EuroDigitalLang i Mirjam Vellinga, izay mitrandraka ny fomba ampiasana ny teknolojia hamelomana indray ireo fiteny Eoropeana vitsy an'isa na fitenim-paritra. Vakio bebe kokoa momba ny fanentanana ato.
Nanomboka tamin'ny taona 1928, fikambanana tsara laza amin’ny iraka hampiroborobo ny teny sy ny kolontsaina Frisian amin'ny karazana habaka rehetra ao amin'ny faritany Holandey Fryslân ny Afûk. Mbola mahita masoandro eo amin'ny fiainana andavanandro ilay fiteny, ary, araka ny filazan'ny Afûk, saika ny mponina miisa 642.000 ao amin'ny faritany no mahay io fiteny io. Araka ny tranonkalan'ny Afûk, “midika izany fa hifanena amin'ny [teny] Frisian ianao ary hampiasa izany na aiza na aiza ao amin'ny faritany: any amin'ny mpanao mofo, any amin'ny fivarotan-dehibe, any amin'ny trano famakiam-boky, any amin'ny dokotera, any am-pianarana, ao amin'ny klioban'ny mpilalao karatra, any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena. amin’ny soratra famantarana ny tanàna sy ny vohitra, amin’ny fampitam-baovao, amin’ny teatira sy any am-piasana.”
Mandray anjara ny Afûk amin’ny fanomezana fampianarana fiteny ho an'ny olon-dehibe, ny famoahana boky sy gazetiboky elektronika, ny famoronana fampiasa, ary ny fanomezana torohevitra ho an'ny orinasa sy fikambanana amin'ny famoronana politika handrisihana ny fampiasana ny fiteny
Sary nomen'i Mirjam Vellinga ary nahazoana alàlana
Fantatr'i Mirjam Vellinga, izay notezain'ny ray aman-dreny samy mpiteny Frisian, tsara ny fikambanana. Rehefa niala tao Fryslân ka nianatra tao amin'ny Oniversiten’i Groningen ihany izy no niha-nahiratra amin'ny maha-tsy manam-paharoa ity fiteny ity sy “ireo kasinga ara-piarahamonina, ara-tsaina ary ara-politika mifandrohy amin'ny fitenenana vitsy mpampiasa.” Vetivety dia nivadika tamin'ny fianarana teny anglisy ho amin'ny fianarana fiteny Frisian izy, ary fotoana fohy taorian'ny nahazoany diplaoma izy no nanomboka niasa tao amin'ny Afûk, izay nijanonany nandritra ny roapolo taona. Amin'izao fotoana izao izy, mitana ny toeran'ny mpitarika ny tetikasa ao amin'ny tetikasa iraisam-pirenena.
Niresadresaka tamin'i Miriam tamin'ny alàlan'ny mailaka ny Rising Voices.
Rising Voices (RV): Manao ahoana izao ny satan'ny fiteninao na an-jotra na ivelan-jotra?
Mirjam Vellinga (MV): Amin'izao fotoana izao, maherin'ny antsasaky ny mponina ao Fryslân no miteny Frisian ary manodidina ny 75 isanjaton'ny mponina no miteny Frisian amin’ny fiainana andavan'andro. Saika ny mponina manodidina ny 650.000 eo ho eo no mahazo ilay fiteny: manodidina ny 95 isanjato izany. Midika izany fa hifanojo amin’ny teny Frisian ianao na aiza na aiza amin'ny fiainana andavanandro.
Mahay mamaky teny Frisian avokoa ny antsasaky ny Frisian. Na izany aza, olona vitsivitsy ihany amin'ny Frisians no mahay manoratra tsara ny fiteniny. Nitombo hatrany io isa io tato anatin'ny taona vitsivitsy. Noho ny fanabeazana sy ny fitomboan'ny fampiasana ny tambajotra sosialy amin'ny fiteny Frisian no nahatonga izany. Misy ny olana amin’ny fampitan'ny ray aman-dreny ny fiteny amin'ny zanany. Mihena tsikelikely izany ary iray amin'ireo antony lehibe indrindra hitazonana ny fiteny iray ho velona.
Eo amin'ny ambaratonga antonony raha azo lazaina ny fahitana izany an-jotra. Amin'ny lafiny iray, maro ny fampiasa novolavolaina. Etsy ankilany, tsy ireo orinasa lehibe amin’ny teknolojia no mamolavola amin’ny fomba mandehahoazy ny fampiasa amin'ny Frisian matetika.
Efa misy ireto fampiasa manaraka ireto:
Google Translate amin'ny alàlan'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina
Facebook amin'ny teny Frisian amin'ny alàlan'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina
Gboard sy Swiftkey ho mpaminavina lahatsoratra mandehahoazy
Frisian ho fiteny ao amin'ny Microsoft Office ahitana fanitsiana tsipelina sy fitsipi-pitenenana ao amin'ny rafitra miasa an'ny Windows (na izany aza, tsy maintsy alaina misaraka ireo, ary tsy miditra hoazy amin'ny fanavaozana na rehefa mividy rindrambaiko Microsoft Office ny olona).
Fitety amin'ny teny Frisian amin'ny alàlan'ny Waze
Rakibolana an-tserasera Frisian-Holandey sy fitaovana fandikan-teny
RV: Inona no antony manosika anao manao izay hahitana ny fiteninao ao amin'ny habaka ankihy?
MV: Tena zava-dehibe tokoa ny fisian'ny fiteny iray eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Mety mihoatra noho izany aza ho an'ny fiteny vitsy mpampiasa/an'ny vitsy an'isa. Tokony ho afaka mampiasa ny fiteninao ianao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Mazava hoazy izany ho an'ny fiteny maro mpampiasa/manjakazaka; tsy maintsy miady hatrany ianao ho an'ny habaky ny fiteny vitsy mpampiasa kokoa ary mifaninana amin'ny herin'ny fiteny lehibe kokoa. Mila hita amin’ireo toerana ireo ny fiteninao izay ahitana ireo mpampiasa (betsaka) ny fiteninao. Ary satria eo amin'ny tontolo ankihy isika rehetra dia tokony ho eo ihany koa ny fiteninao.
RV: Lazalazao ny sasany amin'ireo olana manakana ny fiteninao tsy ho azo ampiasaina feno anjotra.
MV: Tsy dia mahaliana loatra ho an'ireo orinasan’ny teknolojia lehibe ny fampiasana vola amin'ny fiteny vitsy mpampiasa raha resaka ara-bola. Midika izany fa tsy maintsy mila mangataka sy manery azy ireo hatrany ianao ary mila fotoana lava vao tafiditra ny fiteninao. Efa zatra nampiasa ny fiteny mibahan-toerana ho an'io fampiasa manokana io ny ankamaroan'ny mpampiasa ilay fiteny tamin'izany fotoana izany ary tena sarotra vao mety ho azo ry zareo. Mitaky ezaka sy vola fanampiny hatrany ny fampidirana ny fiteninao. Mahaliana anay manokana ny teknolojia ampiharina any an-tokantrano (an-tanindrazana) satria ny vala (an-tanindrazana) no tena matanjaka raha mikasika ny fampiasana ny fiteny Frisian. Miditra any an-tokantrano anefa ny fiteny hafa amin'ny alalan'ny teknolojia, toa ireo fitaovana fampiasa an-tokantrano, ny raboto mikarakara asa sosialy, sns., izay manohintohina ny toerana voajanahary ananan'ny fitenintsika ao an-tokantrano. Mora andairan'izany indrindra ny ankizy ary noho izany dia lasa tsy manome lanja ny fiteniny manokana.
MV: Amin'izao fotoana izao, samy hifantohanay na ny fianarana ny fiteny na ny fanentanana ho an’ny fiteny sy ny fanamafisana izany any an-tsekoly (fanabeazana fototra, sekoly ambaratonga faharoa ary ny sekoly fianarana asa). Zava-dehibe ny fianaran'ny tanora ny fiteny sy ny fahaizany miteny, mamaky ary manoratra izany, fa zava-dehibe ihany koa ny fahazoany aina amin'ny fampiasana izany, ny fahatakarany bebe kokoa ny toetra sy ny fampiasana ny fiteny ary ny rafitra ao ambadik'izany. Ny resadresaka ifampizarana amin'ny namana momba ny fampiasana ny fiteniny sy ny andraikitra manokana any am-pianarana izay mifantoka amin'ny fanaovana sahanasa amin'ny fiteny amin'ny fomba azo ampiharina (saino ohatra ny fomba mety ahatonga ny Frisian ho hita kokoa any amin'ny orinasa izay anazaran-dry zareo mianatra asa) dia mety tsara amin'ny andrana ataonay.
Mba hanamorana ny fampiasana ny fiteny amin'ny sehatra ankihy=nomerika ho an’ny tanora dia namolavola fitaovana fandikan-teny maromaro izahay ary misy fitaovana hafa azo alaina ihany koa, toy ny Gboard sy Swiftkey. Tsy ny rehetra no mahafantatra ny fisian’izy ireo, ka ifantohanay koa noho izany ny fampiroboroboana ireo fitaovana ireo amin'ny fomba mahasarika (rakitsary fohy, zaraina amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy maromaro).
Mba hahafahan'ny taranaka manaraka mampiasa io fiteny io dia ilaina ny manabe ny ray aman-dreny tanora momba ny lanjan'ny fiteny vitsy mpampiasa sy ny fomba fitaizana ny ankizy amin'ny fiteny maro samihafa amin'ny toe-javatra samihafa. Ao Fryslân, misy gazetiboky sy sehatra an-jotra hampahafantarana ireo ray aman-dreny tanora momba izany ary mahazo fanomezana manokana amin'ny fiteny (Taalkado) izy ireo rehefa manoratra ny daty nahaterahan'ny zanany any amin'ny governemanta eo an-toerana.